“ရွှေမြန်မာ”: ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တစ်ရက်အတွင်း လွှင့်တင်လိုပါသလား?
ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခုကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တစ်ရက်အတွင်း လွှင့်တင်လိုပါသလား?
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: Website index, နည်းပညာ, သတင်း
မေးလ် hlayamin11@gmail.com ကို contant လို့ရသလို http://www.ihost-mm.net ကို တိုက်ရိုက်လည်း လေ့လာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
တိုက်ရိုက်ဝယ်သောသူများလည်း ယမင်းရဲ့ဆိုက်လေးကသတင်းရတယ်ဆိုတာ ပြောပေးကြပါနော်
tigerpig said... @ 11 January 2010 at 10:37
ဟီး သိချင်တာ နဲ့ အတော် ဖြစ်သွားတယ် ပိုက်ဆံတော့ ရှိသေးဘူး ကျွန်တော် လည်း ၀ယ် ဖို့ လုပ်အုံးမယ်
အကောင့် လေး ဘာလေး ဖောက်လို့ရရင်တော့ ပိုကောင်း တယ်နော်
ဟီး တမျိုးမထင်နဲ့ ၀ါသနာ ကို
ကျွန်တော် လည်း ၀ါသနာ အရ ကျိုးစားလိုက်အုံးမယ်
အရာရာ အတွက်ကျေးဇူး ပါ